Noho ny fandidiana ny tendany amin'ny angina (hay, catarrhal, herpes)? Inona no azonao atao mandritra ny fitondrana vohoka?
Noho ny fandidiana ny tendany amin'ny angina, arakaraka ny karazana aretina iray?
Raha fantatrao fa misy fanafody mando dia ilaina ny mahazo ny atao hoe angina. Amin'ny fitsaboana io aretina io, dia azo ampiasaina ny famokarana pharmaceutique sy ny fanafody nentim-paharazana. Tokony hotsarovana fa ny olona rehetra dia manana loto mifandraika, noho izany, ny fanafody toy izany dia tokony ampiasaina eo ambany fanaraha-mason'ny dokotera iray.
Angina - karazana sy fitsaboana
Ny anaran'io teny io dia mitovy amin'ny fiteny latinina: "ango". Midika ara-bakiteny hoe "mangeja." Areti-mifindra izy io izay misy fiantraikany amin'ny alikaola sy ny taova hafa ao amin'ny rafi-panafody. Ity patolojia ity dia miaraka amin'ny sarin'ny klinikam-pitsokoana. Ny karazana Angina dia manana ireto:
Tenda marefo miaraka amin'ny angina
Ny dokotera dia tokony hanolotra ny fitsaboana aorian'ny fandinihana mialoha ny marary. Na izany aza, na dia efa nanazavan'ny dokotera ilay marary hanafainganana aza, dia tsy ampy ho an'ny fahasitranana izany.
Zava-dehibe ny manatanteraka araka ny tokony ho izy ny fanitsiana rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fanarahan-kevitra amin'ireto fanolorana ireto:
Alohan'ny hanodina ny tendanao dia mila manongilana kely ny lohanao. Tokony hampiato kely ny fiteny. Ilaina ny vahaolana hiditra lalina araka izay tratra ao amin'ny pharynx.
Tsy maintsy mafana ny fanampiana fantsona. Vao mainka miharatsy ny toe-pahasalaman'ilay marary. Ny vahaolana mafana dia handoro ny fonon'ny moka.
Ny tonsils dia ho tsara kokoa raha toa ny feo "Y" mandritra ny famafana ilay marary.
Ny halavan'ny fepetra dia zava-dehibe ihany koa. Tokony hovonoina mandritra ny 30 segondra raha kely indrindra. Mandritra io fotoana io, ny rano dia hanasa tsara ny alika sy ny hary.
Io medika io dia midika fa tsy azo atao ny mitelina amin'ny tenda malemy. Tsy natao ho an'ny fampiasana anatiny.
Ny fepetra dia tsy maintsy atao matetika.
Fiomanana amin'ny fametahana tenda amin'ny angina
Ao amin'ny fitsaboana ny fanafody fanafody mandoza dia tena mahomby. Indreto ny vokatra ampiasaina matetika amin'ny fanangonana:
Aorian'ny fandosirana dia tsy tokony hihinana mandritra ny 1-2 ora manaraka. Raha tsy izany, ny tsy fahombiazan'ny zava-mahadomelina dia ho vitsy. Raha asiana marika Tonilotren na latabatra azo itokisana ny marary, dia tsy azo alaina avy hatrany izy ireo aorian'ny fanasitranana ny tenda. Ilaina ny miandry iray ora, ary tsara kokoa ny iray sy sasany, ary avy eo vao mandalo amin'ny dingana manaraka.
Fanafody volotsangana amin'ny angina
Amin'ny fampiasana fanafody, dia azo ampiasaina ny fomba hafa. Ny fandraisana azy ireo dia tokony hifanaraka amin'ny dokotera. Ny fanasitranana ny tenany dia mampidi-doza, satria mahatsara ny fahasalaman'ny marary ny fitsaboana diso. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny mahatsiaro fa na dia ny zavamaniry mahomby indrindra aza dia manana lozisialy.
Rehefa malahelo ny tendany, fa tsy misaraka ao an-trano, dia fantatry ny dokotera. Afaka manoro hevitra ny fampiasana fanafody tsotra nefa mahomby izy.
Ny votoatin'ny vahaolana
soda bake - 1 tsp;
iodine - 6 sotro;
ranom-boasary - 1 fitaratra.
Ao anaty vera misy rano mangatsiaka dia mampidio sira, soda sy yoda.
Hamafiso tsara ireo ingredients.
Ny vahaolana manasitrana vonona dia tokony hosasana isaky ny 2 ora. Ny faharetan'ny fitsaboana dia voafaritra tsirairay.
Tena mahomby sy ny ririnina amin'ny fanangonana. Azo ampiasaina amin'ny heriny ny herja isan-karazany. Ny iray amin'izy ireo dia ny daisy mpahay simity.
Sakafo ho an'ny fantsona
ranom-boankazo vita amin'ny ramanavy nohosorana - 1 tbsp. sotro;
Kamomila mandatsaka rano.
Mitondrà vovoka amin'ny volo ary avelao ho 20 minitra.
Alohan'ny fampiasana dia tokony hosoloina io fanafody io.
Esory ny ron-kena ary sotroy. Ny faharetan'ny fitsaboana dia miankina amin'ny tsy firaharahiana ny aretina.
Inona no fomba tsara indrindra hanamboarana azy?
Ny dokotera dia manatona tsara ny safidin'ilay dokotera. Ny fanolorana toro-marika ho an'ny marary, ny tsara kokoa ny mikorontana amin'ny tenda malemy, ny manam-pahaizana dia handinika ny endriky ny aretina, ny fisian'ny alèjy ho an'ireo singa fototra amin'ny zava-mahadomelina sy ireo antony hafa. Ireto manaraka ireto ihany koa dia raisina an-tsoratra:
inona ny mikônalisma dia nahatonga angina;
ahoana ny fomba fiteny mahatsikaiky;
Manana tazo ny marary.
Tsy miankina ao an-tokantrano, tsy azo atao ny mamaritra mazava tsara ny karazana angina ary indrindra indrindra ny manamboatra fitsaboana. Ao amin'ny hopitaly, ity fanadihadiana manaraka ity dia ampiasaina mba hahazoana ny vaovao toy izany:
misy ny fitsapam-pahaizana ankapobeny;
Ny famokarana mikrôbiolojika dia vita;
Ny fitsapana urine dia tanterahana.
Noho ny fananganana tenda amin'ny angina katarra?
Amin'io endriky ny aretina io, dia misy lozam-pandrefesana amin'ny alikaola. Ny aretina dia vokatry ny adeno- na rhinovirus. Ny marary dia mitombo kely ny hafanana sy ny hafanana mangatsiaka. Ao anatin'ny roa andro dia miharihary ireo soritr'aretina ireo, dia mandalo mankany amin'ny ambaratonga manaraka. Raha manana tenda malemy ianao noho ny manasitrana azy:
vahaolana amin'ny sira;
Ity aretina ity dia vokatry ny streptococci. Misy karazana tenda mahatsiravina toy izany:
Ny aretin-koditra dia miaraka amin'ny fantsom-batana, ny lympha amin'ny lampha lehibe, ny fahatsapana mampihetsi-po ao amin'ny tendany ary ny fisehoan'ny fitsaboana tsy misy fangarony. Aorian'ny 3-4 andro dia mihasimba ny soritr'aretina, saingy tsy midika izany hoe mihena ny aretina. Noho ny fanararaotana amin'ny tendany malemy vava:
fanesorana rameva sy kalandrie.
Mihoatra ny tenda ve ny tenda?
Ity aretina ity dia voan'ny otrik'aretina Coxsackie. Ny endriky ny piozolojia dia miavaka amin'ny fisian'ny fery maro. Ny fitsaboana dia ahitana ireto dingana manaraka ireto:
fanasitranana ny tendany amin'ny tendany tenda (Tebrofen, vata-tetraborate solitany);
miparitaka amin'ny valan-javaboahary (Cameton, Panavir);
fananganana takelaka (Lizobakt, Septotelet).
Mandritra ny fiterahana mandritra ny fitondrana vohoka?
Tena zava-dehibe ny fampiasana ny fiarovana sy ny fitaovana mahomby mandritra ny fe-potoana mitondra ny zaza mandritra ny fitsaboana fanafody mando. Noho ny fiterahana vehivavy bevohoka miaraka amin'ny angina dia fantatry ny dokotera. Azony atao ny manoro vehivavy iray ho vahaolana soda. Io fitsaboana io dia tsy miteraka adihevitra miverimberina. Voaomana tsotra izao.
Fitaovana ho an'ny vehivavy bevohoka
rano - 1 fitaratra; sakafo soda - 2/3 tsp.
Ao anaty vera misy rano mangatsiaka aho mametraka soda.
Ireo singa dia tena mifangaro sy manalefaka.
Ny vahaolana voaomana mifanaraka amin'ity recipe ity dia misy ny fihetsika manaraka:
esory ny lolom-po;
mampihena ny fiterahana;
manala ny pharynx.
Noho ny famitahana ny tendany amin'ny toeram-ponenana ao amin'ny tovovavy - vahaolana saline.
Esory ny sira
ranomasina sira - 10 g.
Ao anaty vera misy rano mangatsiaka, ampio rano sira.
Ireo singa ireo dia mifangaro.
Ny vehivavy dia tokony hanangona vahaolana mivonona farafahakeliny in-5 isan'andro.
Io fanafody io dia manala ny lozabe ary manala haingana ny fahasosorana.
Anatin'ireo fanafody, eto dia azonao atao ny miarahaba anao mandritra ny fitondrana vohoka:
Fitsaboana urticaria ao an-trano
Famindrana ny fiarahan'ny soroka
Ahoana ny fisafidianana ny haino aman-jery?
Sinusitis sy sinusitis - inona ny fahasamihafana?
Ahoana no hitiavanao vehivavy?
Kitapo fofona fofona fofona fofona
Wireless Mouse ho an'ny laptop
Leeches ho an'ny fahavoazana
Salady misy holatra holatra
Nahoana ny ravina no mihozongozona eo amin'ny renirano?